Mhlawumbi ngamnye wethu weva ngokutya okuluhlaza. Kodwa abaninzi babhekisela kulo mlo ngokutya okukhulu. Esi simo sengqondo sisuka kwizithethe ezondlo lwelizwe lethu. Kodwa ukuba unquma ukufunda okungakumbi malunga noko kukutya okuqingqiweyo nokuba nokuba kukuhle okanye kuyingozi kumzimba womntu, ke le nqaku ikwawe.
Kubantu abaninzi, ukutya kukuphela kwayo, oko kukuthi, badla kuphela ngenxa yokuba kubangelise, kwaye kungekhona ngenxa yokuba bafuna ukuziva befanelekileyo kwaye banempilo. Ngako oko, ukuba abantu abanjalo kwisitya i-taste main, kwaye ayilungile. Esi sizathu esibalulekileyo sokungaqondi izibonelelo zokutya okuluhlaza.
UG. Shelton, owaziwayo ngokutya, uthi abantu abakhetha ukutya okuphekiweyo bahlala bephila kuphela ngenxa yokuba banokutya okudlayo ekudleni kwabo: imifuno, iziqhamo, iisuthi, i-juice, njl. Ngombulelo kuphela kule mveliso umzimba ufumana ilungelo umthamo wezondlo. Ifilosofi yokutya okuluhlaza kukuba ngokutya ukutya okuluhlaza, ngaphandle kokunyanga kwabo, sithola ubuninzi bezondlo kunye nezondlo.
Iingenelo zokutya okuninzi
Ngaba kuncedo ukutya ukutya okuluhlaza kumzimba womntu okanye unokuyingozi? Ngomzamo wokuphendula lo mbuzo, ilizwi elithi "elungileyo, elinye lilo ukufa" liyakhumbula. Ngokuqinisekileyo, ukutya okuluhlaza kunokuba luncedo kwaye kunokubuyisela impilo yabantu, kodwa konke kuxhomekeke kumntu - ngaba uyayidinga?
Ngokwezibalo, abancedisi bokutya okuluhlaza abanako ukugula. Kwaye kwimeko yezifo ezincinane, umzimba wabantu abanjalo unokukhawuleza ukujamelana neentsholongwane kunye nezifo. Kwaye izifo ze-oncological kunye neentliziyo ngokuqhelekileyo aziqabile "ukutya okuluhlaza".
I-fiber dietary, efumaneka kwizinto eziluhlaza, inceda ukukrazula i-hemorrhoids kunye nokuqhaqha. Abantu abanesifo sengqondo kunye neengxaki zesikhumba, i-rheumatism iya kukwazi ukuphonononga iindleko zondlo olusisiseko, kuba ukutya okunjalo kubonisa ukutshintshwa kwamanzi. Oku kunciphisa inani lesetyu elisetyenzisiweyo, kwaye oku, kwakhona, kucetyiswa ukuba uxinzelelo lwegazi.
Imihla kunye namantongomane aqukethe inani elikhulu leekhalori, nangona kunjalo, usebenzisa iziqhekeza ezi-5-6 kuphela kwisinye sezidlo, unokugcina uvakalelo lwamaxesha ambalwa. Kule meko, umzimba uya kufumana inani elifunekayo lamandla.
Ukutya okumanzi kunemiphumo emihle kwimeko yamazinyo kunye neentlobo, ngokukhawuleza kunciphisa umngcipheko wokuphuhlisa izifo zomlomo. Ukongezelela, kunokusindisa umntu kuloo ngxaki engathandekiyo njengephunga emlonyeni.
Umonakalo wokutya okuluhlaza
Ukutya okumanzi kuyingozi xa udla ukutya okuluhlaza ngaphandle kokucinga. Ukuze ungalimazi umzimba wakho njengokutya, kufuneka ukwazi imithetho embalwa. Umzekelo, ezinye "ukutya okuluhlaza" khetha iimbotyi njengomkhiqizo wokutya oyintloko. Nangona kunjalo, zicetyiswa kuphela ngezihlandlo, kuba ziqulethe izinto ezininzi ezingenakungenakonakala ezikwazi ukudala i-toxins esiswini, ukuchithwa kunye nokugqithiswa kwayo umzimba kufuneka usebenzise amandla amaninzi.
Iinqathi ze-vitro A zivela kumthombo ogqwesileyo, kodwa i-fibre equle kuyo, ibimbela ukufana kwayo. Ukuze uhambelane nale vithamini, udinga amanqatha, kwaye kungcono ukutya izaqathe ezigayiweyo. I-Sorrel, isipinashi kunye ne-rhubarb ekubunjweni kwazo ziqulethe i-acid eninzi, ephazamisa ukutyunjwa kwe-calcium kwaye iyenqanda ukungena kwayo emzimbeni. Ngoko ke, ngaphambi kokusebenzisa ezi zityalo, kucetyiswa ukuba ubuncinci ukubaphatha ngamanzi abilayo.
Ukungahambisani nokutya okuluhlaza kunokuba ngumntu ongeyantlukwano kwiintlobo ezithile zeeprotheyini, ezingaphelelanga ngexesha lokupheka. Kwakhona, le ndlela yokutya ayikhuthazwa kubadala kunye nabantwana abaselula.
Oogqirha abaninzi abaxhalabele ngokutshintsha ukutya okuluhlaza. Bacebisa ukugcina umlinganiselo wokutya okuluhlaza ukupheka ama-60 ne-40 ekhulwini, ngokulandelanayo. Oku kubangelwa kukuba awukwazi ukutya iimveliso ezinobumba ezifana neetatata, intlanzi, inyama kunye nabanye abaninzi. Ukongeza koko, abahlali bezixeko ezinkulu abanakufumana ithuba lokuba badle imali efunekayo yeemveliso eziqulathekileyo, kunye nalabo abafumaneka kwiimarike, ngokuqhelekileyo unako kubangelwa ukuba kusemgangathweni.
Iimveliso zobisi zihamba kwinkqubo yokunyusa, kwaye kaninzi ziqulethe izikhuselo. Ubisi obomvu bufumaneka kuphela kwidolophana, kuba kuphela kuzo zonke izinto ezincedo zigcinwa.
Amantongomane kunye nezithelo ezomileyo ziveliswa kumagumbi athile okumisa, okwenene, okunciphisa inani lemvelo lezinto ezisebenzayo kuzo. Kanti amanqatha angadliwa ngokubanzi.
Ngukuphi ukutya okungeyasetyenziselwa ukutya okuluhlaza? Okokuqala, imveliso yemifuno. Ezi zibandakanya imifuno kunye neziqhamo, i-sesame, i-peanuts, ingqolowa, iigrasi eziluhlaza kunye neembotyi, imbewu yepoppy, izityalo ezihluma, i-flaxseed, i-apricot kernels, amajikijolo, imifuno kunye nemifuno enokutya, eninzi kwimeko yethu. Abanye "ukutya okuluhlaza" kubandakanya ekudleni kwabo okungenagwele okubhaka isonka esityiweyo.
Ingqalelo ekhethekileyo ihlawulwa kwakhona ekukhethweni kweziphuzo. Ngoko unako ukusela amanzi amaminerari kunye nococekileyo ngamanzi angenakunqandwa, iziphuzo ziselo kunye neentshisi ezivela kwiijikijolo ezitsha. Kunokwenzeka kwaye kunokuba luncedo ukuba nemveliso enjalo yemvelo, eyenziwe yendalo ngokwalo, njengobusi.
Ukuba usitshintsha ukutya kwakho kwaye utshintshe ngokupheleleyo ekudleni okuluhlaza, wonke umntu kufuneka azenzele isigqibo. Isigqibo kufuneka sithathelwe ingqalelo, kwaye izinga lempilo yakho lilukhuni. Ngokuqhelekileyo isimo sengqondo esibi kulolu hlobo lwesondlo sakhiwa kumzekelo wabantu abangazange bavavanye impilo yabo baze baqikelele ekubeni "ukutya okuluhlaza". Ngenxa yoko, ukutya okunjalo kubangele ukuhlaselwa kwezifo, apho iphoso, ngamazwi abo, kukusetyenziswa kokutya okuluhlaza kuphela. Abantu abanjalo basasaza iindlebe malunga neengozi zokutya okuluhlaza.
Ukuba uthatha isigqibo sokutshintshela ekudleni okuluhlaza kwaye ngenxa yoko, ngokwempilo yakho, akukho zichaso, yenza ngokuthe ngcembe. Ukuqala, ukuyeka utywala, itiye emnyama kunye nekhofi. Emva koko ukunciphisa ukusetyenziswa komgubo kunye ne-confectionery, iimveliso ezigqityiweyo kunye nokugxila. Yaye xa uthe wagxininisa ngokupheleleyo oku kutya ukutya kwakho, uya kuvakalelwa kukuba unamandla kunye nempilo.
Isonka kunye ne-anyanisi kunye neminquma
Ungasusa njani upende kwi-jeans
Indlela yokuphepha iingxaki zeenwele zonyaka
Ngesitayela saseMadonna: iincinci ezincinci - i-summer trend-2016